Portugal na France Euro 2021 Amụma & Tipsgba Atụmatụ - latabernasanlucar.com
By Sara GrayJune 21, 2021No Comments
Portugal na France bụ egwuregwu ikpeazụ maka otu abụọ na otu F. Nke a ga-abụ egwuregwu gbara ọkpụrụkpụ maka otu abụọ a dịka ha na-achọ iru eru maka agbapụ knockout na Euro 2020. France chọrọ naanị ihe osise iji tozuo. Mana France ga-achọ izu iji kwado ohere iji merie otu F na Euro 2021.
Ọ bụrụ na Pọtugal enweta otu na France na Hungary na-ese ma ọ bụ tufuo megide Jamanị, Portugal ga-emecha nke atọ n’otu ahụ Nke a pụtara na ha ka ga-enwe ohere iji tozuo maka knockout gbaa gburugburu dabere na ọkwa ha ma e jiri ya tụnyere ndị otu ndị mechara 3rd n’òtù ha.
Portugal ga-achọ izere akara aka a ma dịka France, ga-agba egbe maka mmeri.
Egwuregwu Portugal na France ga-eme na June 23 na Budapest Hungary na 2100 elekere Central Eastern European Summer Time.
Portugal meriri egwuregwu mmeghe na Euro 2020 megide Hungary 3-0 site na goolu abụọ nke Ronaldo. Ewezuga ihe mgbaru ọsọ 3 ndị a Portugal nwere ọtụtụ ohere na egwuregwu a ma lee anya n’azụ.
N’egwuregwu ha na-esote Germany, Portugal na-awakpo obi ọjọọ ma nye goolu na nkeji iri na ise nke ekele Ronaldo ọzọ. Portugal enweghị nkwekọrịta na-agbachitere ma kpebie ịghara ịpị Germany.
Mkpebi a furu Pọtugal nnukwu ego ka ha nyere goolu abụọ n’ime nkeji 4, bụcha goolu nke ha. Ejiri Portugal merie egwuregwu 4-2.
Egwuregwu a gosipụtara adịghị ike isi abụọ na Portugal. Isi ike abụọ a bụ:
Disciplinedọ aka ná ntị adịghị mma iji chebe onwe ya
‘Skpụrụ mbụ nke Portugal nke ịbụ kọmpat na-agbachitere na-arụ ọrụ na mbido, ndị na-agba ọsọ ga-adị warara kama ịnọ na mbara ala nke gọnahụrụ ndị na-awakpo ndị German na ndị etiti ka ha mepụta.
Agbanyeghị, nke a hapụrụ ọtụtụ ohere maka nku ala German ịwakpo site na obosara ahụ. Ha nwere otutu oghere ha mepere nke oma. Emere ihe mgbaru ọsọ 2 site na mbara nke jidere Guerriero na Dias na mberede ka ndị German na-ekpuchi anya.
Ọ bụ ezie na Portugal na ndị 2 na-agbachitere ndị na-agbachitere ha na-egwuri egwu, ha enweghị ike igbochi mmegharị na mkparịta ụka nke Kimmich (onye ziri ezi zuru oke) na onye na-azụ azụ (onye bụ akụkụ azụ azụ ziri ezi).
Ọ dị mkpa ka ndị na-egwu bọọlụ na-agbachitere na-agagharị mgbe niile ma na-enweta bọọlụ, ihe Danilo Perriera na William Caravlho na-arụghị ọrụ.
Ọ bụ ezie na ndị mwakpo ahụ, Bernando silva na Diago Jota ga-ada azụ iji kpuchie nku nku ahụ, mgbe Portugal kwenyechara, Portugal enweghị ike ịgbachitere otu.
Portugal na-ejikarị usoro 4-2-3-1 egwuri egwu
Portugal hụrụ igwu egwu na obosara. Obosara na-abịa site na azụ azụ. Raphael Guerriero na-abụkarị onye na-awakpo ọgụ zuru oke na ọ na-esi n’aka ekpe abịa ebe ikike azụ zuru oke dị ntakịrị nchekwa.
Midfield nwere onye na-agbachitere etiti na-agbachitere ebe onye nke ọzọ bụ ntakịrị karịa igbe igbe ọkpọ ọkpọ. Mgbe ụfọdụ igbe a na-agba ọkpọ midfielder na-ada miri emi ma na-eme dị ka onye na-agbachitere midfielder na-agbachitere ya, karịsịa mgbe Portugal na-egwu otu egwuregwu siri ike.
Nke a bụ ihe anyị hụrụ mgbe Portugal na-akpọ Germany na Danilo Perriera na William Carvalho na-agbada miri emi.
Ronaldo na-abụkarị onye ọkpọ na-echere onye na-atụgharị anya na ya, mepụta ngwa ngwa maka ndị na-egwu egwu nke 3 wee gaa n’ihu na-aga n’ihu n’ime igbe mmegide.
Bruno Fernandes bụ onye mbụ na-ahọrọ ime obodo na-ebuso onye na-egwu egwu egwu na Bernando Silva na-ejikarị ya n’aka nri na otu nke Diogo Jota ma ọ bụ Joao Felix n’aka ekpe.
Banye na egwuregwu megide France anyị na-atụ anya na a ga-eme ọtụtụ mgbanwe.
Maka ndị na-ebido ebido, anyị na-atụ anya na otu n’ime Danilo Periera na William nwere ike ịdata na onye ọzọ na-eche nche dịka onye dị ka Ruben Neves ga-anọchi ya.
Anyị na-atụ anya na Bruno Fernandes ga-adaba na miri wee mepụta nwoke atọ nke ga-agbanwe usoro Portugal nke ọma na 4-3-3 site na 4-2-3-1.
Na Nchekwa ndị 2 n’obosara ga-ada azụ na ịgbachitere. Mgbe ekwuputara usoro a, akara a nwere ike ịdị ka 4-3-3 na ihuenyo gị mana n’eziokwu enwere ohere dị elu ọ ga – abụ nke 4-5-1 siri ike.
Anyị na-eche na ọ ga-abụrịrị na 4-2-2-2 dị ike. Portugal nwere ike ịdọrọ na 2 ndị na-agbachitere agbachitere, igbe 2 na ndị na-agba bọọlụ na-agba agba ga-amagharị ma ọ bụ jiri nwayọọ banye na 2 n’ihu ka ndị azu zuru ezu nwee ike ịwakpo site na obosara.
Na Nchekwa, ọdịdị ha nwere ike iyi 4-5-1 ọzọ na ndị etiti na-ada azụ yana 1 nke ndị na-aga n’ihu.
Ha nwere ike ịkwado n’ụzọ dị otú a karịa ọnụ ọgụgụ France nke a na-ejikarị 3 n’etiti etiti.
Joao Felix na Nuno Mendes weghaara obere mmerụ ahụ nke hụrụ ka ha na-efu egwuregwu megide Germany. Enweghi ozi ọ bụla ma ha dị nke na-ebelata nhọrọ Portugal.
Formdị France, Usoro akara aha na Usoro
Na-abata na Euro 2020 France nọ n’ụdị dị elu. Le Bleus furu naanị naanị egwuregwu 1 n’ime egwuregwu 13 ikpeazụ ha tupu Euro 2021.
Mgbe emechara ọmarịcha na egwuregwu mmeghe ha megide Germany, nke France meriri 1-0, France gbalịsiri ike ịkwụsị Hungary na egwuregwu nke abụọ ha.
Hungary nọdụrụ ala ma gbachitere ya nke ọma ebe ndị France nwere ikike, nwee ahụmịhe na kpakpando ndị nwere ọgụgụ isi, nke na-enwekarị ụzọ ha ga-esi merie obere bọọlụ meghere emeghe mgbochi Hungary.
France na-agba bọl na-ebuso agha ọgụ nke anyị hụrụ ka ha na-eme megide Germany mana ha nwekwara omimi n’ime ndị otu ha ịgbanwe usoro ha iji mebie nchebe siri ike.
Ihe nkwado nke France na-anọdụ ala ala ma Kante na-agbanye ya, obosara ahụ sitere na mbara ihu na ndị na-etiti egwuregwu 2 na-egwu n’ihu kansa.
France na-amalitekarị na 4-3-3 mana otu ọgụ ahụ nwere ike ịdaba ma ọ bụrụ na ha chọrọ nwoke ọzọ n’etiti etiti iji mepụta 4-4-2 n’ụzọ dị irè.
Nke a bụ ihe mere n’oge egwuregwu France na Germany mgbe Griezman malitere ịda azụ ma mepụta egwuregwu site na miri emi maka ndị otu ya na-ebuso ya agha, Benzeema na Mbappe.
France ga-arapara n’usoro ihe a ma soro ihe nlereanya nke Germany maka iji adịghị ike nke Portugal na nku ya.
France ga-agba mbọ kụọ Portugal na nkwụsịtụ Mbappe.
France Mara amụma akara
Anyị na-atụ anya na akara France agaghị agbanwe agbanwe. Oussamane Dembele merụrụ ahụ megide Hungary ma eleghị anya ọ gaghị anọ n’oche.
Portugal na France Euro 2021 Amụma
Anyị kwuru etu Portugal na France si egwu egwu na usoro ha nwere ike iji megide ibe ha mgbe anyị na-akwado amụma maka egwuregwu ahụ.
Nke a bụ nchịkọta dị mkpirikpi banyere amụma anyị nwere maka Portugal na France na egwuregwu a dị oke mkpa na Euro 2021:
France ga-ele anya na ya ga-akụ Portugal site na mbappe. Guerrero bụ aka ekpe ma ọ na-aka ọgụ karịa aka ekpe, ebe Mbappe na-egwu egwu n’aka nri. Mbappe ga-eche Guerrero ihu n’akụkụ a wee gbalịa iji ohere ọ hapụrụ mgbe Portugal na-awakpo ya.
Portugal ga-agbali igbochi iyi egwu a site n’ịgbalị ịmụ ihe site na mmejọ ha megide egwuregwu ha na Germany, ihie ụzọ ahụ bụ enweghị ike ịgbachitere dị ka otu. Dịka anyị kọwara na mbụ, ha ga-anwa ịlaghachi n’ụdị 4-5-1 ma nọrọ na kọmpat naanị Ronaldo na-anọ n’ihu n’ihu na-achọ ịlụso ọgụ ọgụ.
Portugal bụkwa ndị na-alụ ọgụ ma ha na-awakpo obosara. Ha maara na France nwere ike ịkọwa midfield kachasị mma n’ụwa ma ha ga-anwa ịgbatị mbara igwe a n’ogologo ha na 2 nke igbe ha iji kpoo ndị na-etiti bọọlụ “n’efu” mgbe Portugal nwere bọọlụ.
N’ime egwuregwu ise gara aga dị n’etiti Portugal na France, egwuregwu France meriri egwuregwu atọ, otu egwuregwu mba Pọtugal na otu egwuregwu mechara biri na ntaramahụhụ. Na egwuregwu ise a naanị goolu isii. Nke ahụ pụtara na nkezi egwuregwu ọ bụla nwere ihe mgbaru ọsọ 1.2 maka egwuregwu ọ bụla.
Ọ bụrụ na anyị na-atụle ihe mgbaru ọsọ ndị a gbanyere na egwuregwu 4 ikpeazụ, nkezi a na-agbadata na-erughị ihe mgbaru ọsọ 1 (ihe mgbaru ọsọ 0.75 kwa nke ziri ezi).
Ihe osise yiri ka ọ ga-abụ na eleghi anya na egwuregwu nke oke a mana akụkọ ihe mere eme na-egosi na agaghị enwe ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ a. Ozugbo otu n’ime otu ndị a guru akara, otu ahụ ga-egwu nke ọma.
Enweghị nhọrọ maka Portugal n’ihi Cancelo nwere ịdọrọ na Euro 2020 n’ihi nkụja na mmerụ ahụ na Nuno Mendes, Joao Felxi na Andre Gomes, Portugal ga-enwe oge siri ike ịgbanwe ihe, ọkachasị na nchekwa.
Eziokwu a ma ọ bụ nwute nwere ike inye France ọnụ ma anyị buru amụma France iji merie 1-0 megide Portugal
Portugal na France Euro 2020 Nsogbu
Ndị na-ere akwụkwọ na-enye nsogbu ndị a maka asọmpi Portugal na France na Euro 2021:
Portugal 3.85 Dọta 2,95France 2.25
Site na nsogbu ndị a, anyị nwere ike ịhụ nke ọma na ndị na-ede akwụkwọ na-akwado France na egwuregwu a n’etiti Portugal na France na Euro 2020.
Bookmaker na-enye Portugal na France Egwuregwu na Euro 2020
Portugal na France Euro 2021 Atụmatụ ịkụ nzọ
Ọ bụrụ na ị gụọ akụkọ anyị gbasara usoro ịkụ nzọ bọl na egwuregwu ịkụ nzọ bọl, ị ga-amata Portugal na Germany bụ egwuregwu zuru oke iji tinye nzọ na Euro 2020.
Nke a pụtara na ị nwere ike ị nweta ego gị okpukpu atọ site na ịkụ nzọ na Portugal ma ọ bụ dọta ma rịa ego gị okpukpu abụọ ma ọ bụrụ na ị banye na France.
Tinye otu nzọ na Portugal iji merie na otu nzọ (nke hà nha) na France iji merie. N’okwu a ị ga – efunahụ ego gị naanị ma ọ bụrụ na enwere eserese mana ọ ga – eme na egwuregwu dị oke egwu.
Yabụ na ihe ị na-eme bụ ị kewaa ego gị maka egwuregwu ahụ. Ka anyị kwuo na ị nwere mmefu ego nke € 200 maka egwuregwu a. Place na-etinye otu nzọ nke € 100 na Portugal na € 100 ọzọ na France.
Ọ bụrụ na Portugal merie pasent Uru gị ga-abụ 92.5% n’ihi na Uru gị ga-abụ 5 325- € 200 = € 125.
Ọ bụrụ na France merie ị ga-ejedebe na 12.5% ​​uru (€ 225- € 200 = € 25. 25 bụ 12.5% ​​nke 200).
O doro anya na sistemụ a na-egosi na uru pesara gị ga-adị ala ma ọ bụrụ na ị zọọ otu otu (285% uru ma ọ bụrụ na ị na-akụ nzọ na Portugal na 125% ma ọ bụrụ na ị na-azọ nzọ na France) mana sistemụ a na-ekwenye na ị gaghị efu ego.
Ego TeamOddsBet ỌnụegoWinProfit% Portugal3.85 € 100 € 38592.5% France2.25 € 100 € 22512.5%
Nhọrọ ịkụ nzọ dị elu maka France na Germany
N’okpuru 1.5 ngụkọta ihe mgbaru ọsọ a ga-gbatara. Nsogbu, 2.95. Anyị na-akwado nke a dabere na data nke egwuregwu 5 gara aga ebe ọ bụ naanị ihe mgbaru ọsọ nke ihe mgbaru ọsọ 1.2. France iji merie, n’okpuru ihe mgbaru ọsọ 1.5 zuru ezu ka agbatara.Odds7.0. Nke a bụ nhọrọ dị ịtụnanya dabere na data akụkọ ihe mere eme na ụdị ugbu a. Nhọrọ a ga – enyere gị aka imeri 7x ma ọ bụ 700% nke ego gị ma mechaa nweta uru nke 6x ma ọ bụ 600%! Nsogbu 3.85. N’ihi na anyị na-atụ anya na France ga-emeri 1-0, n’ụdị nkwarụ a egwuregwu ahụ ga-abụ akara ma ị ga-emeri. Nke a bụ nhọrọ magburu onwe ya n’ihi na oge ikpeazụ egwuregwu dị n’etiti Portugal na France kwụsịrị na ọnọdụ ebe otu otu meriri akara nke ihe karịrị 1 bụ ụzọ laghachi na 2001 (nke France meriri 4-0) ma dakọtara onye mmeri. Lee ụfọdụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ n’ezie. Anyị na-etinye nsogbu nke mmeri maka France na onye ọkpụkpọ ga-akara:
-Kylian Mbappe, nsogbu 4.10
-Antoine Griezman, nsogbu 4.40
-Karim Benzeema, nsogbu 4.40
-Ronaldo, emegide 11.0 (ee, anyị buru amụma mmeri maka France na 1: 0, akara akara mana Ronaldo nọ n’ọnọdụ dị mma yabụ enwere ohere ọ ga-ezoro otu na france na-enweta 2: 1)